Noocyada Federalismka. | RUUG-CADDAA
dawlada Maraykanka markii ugu horraysay ee lagu dhisay Dastuurka waxaa loo arkayay in lagu maamulayo nidaam federaali ah.
erey uu ka soo jeeda Federaalka, ayaa ah fikradda ah in madax-bannaanida dowladeed loo kala qaybiyo maamul-goboleedka dhexe, iyo qayb kale oo siyaasadeed, sida dawlad-goboleedyada, Tani waa sida dawladda Maraykanka oo leh dowlad qaran, iyo dawladda gobolka.
Waxaa jira xayiraadyo xadidan oo ku saabsan xukuumadda qaran ee ku qoran Dastuurka ku xusan qodobka 1, 2, iyo 3. Si kastaba ha ahaatee, ma jiraan xayiraad dowlad goboleed, xaqiiq ahaan, Dastuurku wuxuu u saamaxayaa dawlad goboleedyada wuxuuna damaanad qaadayaa xuquuqda laguma qorin Dastuurka.
Waxaa jira noocyo badan oo kala duwan oo federaali ah oo ay ku jiraan federaalka laba-geesoodka ah, federaal-wadaag, iska-horimaad farsamo, federaaliyad maaliyadeed, iyo federaal cusub oo cusub. Saddexda nooc ee ugu wayn ee Federaalka waa;
1) Fikradda Labada ah (dual federalism) waxay tahay fikradda ah in midowga iyo dawladda ay wadaagaan awood laakiin Xukuumadda Federaalku waxay haysataa wax ka badan dawladaha shakhsiga ah. Tani iminka waa sida uu u shaqeeyo nidaamka Maraykanka.
2) Federaalka wada-shaqeyntu (coorperative federalism) waa fikradda ah in dawladda federaaliga ah iyo dawlad-goboleedku ay wadaagaan awoodda. Marna lama isku dayin laakiin waxay u muuqataa inaan u badneyn in ay u shaqeyn doonto sida dawlad goboleedyada iyo xukuumadda federaalka lagu xiri doono duruuf aan awood u lahayn in ay gaadho xal u helidda sharciga muhiimka ah.
3) Federaalka Maaliyadeed (fiscal federalism) waa nooc ka mid ah Federaalka oo ah boorsada lacag ee ay maamusho wax kasta, Tani waxay siinaysaa miisaaniyad ballaaran oo awood leh iyada oo mas’uul ka ah miisaaniyadda Mareykanka, Sidaa daraadeed waxaay xadayn kartaa miisaaniyadda qaybaha kale ee siyaasadeed ee aan ku qanacsaneyn in ay ka shaqeyneyso danta ugu fiican ee Mareykanka.
Waxaa jira dhowr xaaladood oo taariikhdeena ka mid ah waqtiyadii ay jirtay markii ay Congress-ka siiso miisaaniyadda madaxweynaha. Mid ka mid ah tusaale ahaan tani waxay noqon doontaa Dib u Dhaqanka Tonkin Gulf ee 1964 kaas oo siiyey Madaxweynihii Johnson ee awoodda u lahaa, oo muujinaya midnimada iyo go’aanka Mareykanka ee taageeridda xorriyadda iyo ilaalinta nabadda ee koonfur bari Asia. Sida qof walba u arki karo caleemaha meel bannaan oo u furan tarjumaadda. Si loo soo xigto Dr Berry, waxay ahayd aasaaskii baaritaan aan jirin.
Qeexitaanku wuu isbeddelay wakhti ka dib, taariikhda ayaa na tusaysa in tallaabadeennu ay abuurtay qaabab cusub oo Federaal ah ee Maraykanka waqtiyada dhibaatada.
Fikradaha wax-soo-saarku (creative federalism) waxay ku badan yihiin Maraykanka hadda, halka Federaalka Cusubna uu ahaa noociin federaali ah oo dawladda dhexe laga soo bilaabo 1960 ilaa 1980, iyo gaar ahaan xilligii maamulka Johnson ee 1960-kii.
Qodobada ugu muhiimsan ee Fikradaha Shucuur leh ama Federaalka Xajmiga Lacagta: ayaa ah in xukuumadda federaalku ay go’aamisay baahida dawladaha ayna u fidiso adeegyo iyaga u gaar ah. Xaaladdan oo kale, xukuumadda federaalku waxay si toos ah u shaqeysaa dawladaha, waxayna u adeegtaa baahidooda. Tani waxay ku lug leedahay qorshaha guud ee u dhaxeeya dawladaha federaalka iyo dawlad goboleedka si ay u gaaraan ujeedooyin u shaqeeya dawladaha. Maalmahan, federaalnimada hal-abuurka ah ayaa u muuqata in ay hoos u dhigtay nidaam federaali ah iyo kor u qaadista awooda dawladda federaalka ah ee bilowday inta lagu jiro xilligii madaxweynenimada FDR oo ka soo kordhay halkaas.
4)Fedraal cusub oo cusub (New federalism) ayaa loo abuuray iyada oo laga jawaabayo awoodda dawlad-goboleedyada oo lumiyay sababo la xiriira fulinta xuquuqda madaniga iyo madaxweyne Roosevelt New Deal ee 1960-kii. Nooca federaalkani wuxuu soo celiyay xuquuqda dawladaha hoose iyo dawlad goboleed waxayna u beddeleen awoodda xukuumadda federaalka ee dawladaha yaryar. Madaxwaynaha Nixon waxa uu si xushmad leh u dhaqan-galiyay arrintan isagoo dib u soo celiyay bixinta deeq-lacageedka iyo wadaagidda dakhliga dowladda iyo dawladaha hoose.
Siyaasi Cali Daacuun oo shakhsiga soomaaliyeed ee waqtigan runta ka hadla.
« Wax badan ka Ogow Sababta dowlada Hindiya ay u dooneyso inay xirto Daaciga Zaki Naik.
SOOMAALIGII DALKA KHIYAAMOW WAA DIL! »